Shir loo qabtay dhalinyarada gobolka Banaadir oo warmurtiyeed laga soo saaray – Bandhiga
Shir loo qabtay dhalinyarada gobolka Banaadir oo warmurtiyeed laga soo saaray
Shirwynahan guud ee dhallinyarada Gobolka Banadir, ahna shirweynihii koowaad kaas oo soconayay mudo labo maalmood ah. islamarkaana ay ka soo qayb galeen guud ahaan dhallinyarada 17 Degmo ee Gobolka banaadir, ururada dhallinyarada madaxa banaan, dhallinyarada Jaamacadaha, qaar ka mid ah dhallinyarada qurbo-joogta ah, dhallinyarada maamul goboleedyada iyo Naadiyada aqriska qoraalka. sannadkan koowaad waxaa diirada lagu saaray doorka dhallinyaradu ku leeyihiin nabadda iyo is-dhexgelka Bulshada.
Dhallinyarada Gobolka banaadir iyo dhammaan ka soo qayb galayasha shirka nabadda iyo is-dhexgalka Bulshadu waxay baaq nabadeed u dirayaan deegaanada ay ka soo cusbonaadeen dagaalada sokeeye. Waxayna maamulada iyo dowladda dhexe ugu baaaqayaan inaan la ogolaan inuu sii daato dhiigga shacabka Soomaaliyeed.
Dhallinyarada Gobolka banaadir waxay hambalayo u dirayaan madaxweynaha Jamhuuriyada federaalka oo maanta saxiixay sharciga Hay’adda Naafada Qaranka.
Dhallinyarada Gobolka Banaadir waxay sidoo kale u mahadcelinayaan guud ahaan madxada Qaaranka, gaar ahaan maamulka Gobolka Banaadir oo si wacan ay dhallinyarada somaaliyeed u garab taagan yihiin iyo doorka wax ku oolka ah ee ay ka qaateen taabba gelinta shirweynaha doorka dhallinyarda ee nabada iyo is-dhexgelka Bulshada.
Ugu dambayn dhallinyarada Gobolka Banaadir waxay cadaynayaan inay diyaar u yihiin ka shaqaynta amniga iyo is-dhexgelka Bulshada